OTU ESI ETINYE TELEGRAM NA EKWENTỊ - TELEGRAM - 2019
Hụkwa: Otu esi etinye Telegram na kọmputa Windows
Ndị nwere smartphones na mbadamba na-adabere na ngwa osụpụ gam akporo os ọ bụla ngwa ọ bụla, na Telegrams abụghị ihe ọzọ, ha nwere ike ịwụnye ma site na ọrụ (na-atụ aro site na ndị mmepe) usoro na-agafe ya. Nke mbụ gụnyere ịkpọtụrụ Ụlọ Ahịa Google, nke, site n'ụzọ, nwere ike iji ọ bụghị naanị na ngwaọrụ mkpanaka, kamakwa site na ihe nchọgharị PC ọ bụla.
Nke abụọ bụ ịchọpụta onwe gị faịlụ ntinye na ụdị nke APK na ntinye ya na-esote n'ime ebe nchekwa nke ngwaọrụ ahụ. Ị nwere ike ịmatakwu otu esi eme nke ọ bụla n'ime ụzọ ndị a n'otu isiokwu dị iche na weebụsaịtị anyị, nke e gosipụtara na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Gụkwuo: Ịwụnye Telegram na gam akporo
Anyị na-atụ aro ka ị mara onwe gị na ụzọ ndị ọzọ nwere ike isi wụnye ngwa na smartphones na mbadamba na "robot green" n'ụgbọ. Karịsịa, ihe ndị dị n'okpuru ebe a ga-achọ ndị nwe smartphones zụrụ na China na / ma ọ bụ ahịa na mba a, ebe ọ bụ na Google Play Market, na ya niile ọrụ ndị ọzọ nke Ezi Corporation, adịghị adị.
Ụzọ maka ịwụnye ngwa ngwa Android site n'ekwentị gị
Ụzọ maka ịwụnye ngwa ngwa Android site na kọmputa
Ịwụnye ọrụ Google na ngwaọrụ mkpanaka
Ịwụnye Ụlọ Ahịa Google na ama ama China
N'agbanyeghị na Apple na-arụ ọrụ sistemụ arụmọrụ, ndị nwe iPhone na iPad nwekwara ihe ha ga-eme ma ọ dịkarịa ala ụzọ abụọ iji wụnye Telegram, nke ọ bụla metụtara ngwa ọ bụla. Akwadoro ma dee ya site n'aka onye na-emepụta nanị otu - ịrịọ na Ụlọ Ahịa Ụlọ Ahịa, - ụlọ ahịa ngwa ngwa, nke a na-etinye na ya niile na smartphones na mbadamba nke ụlọ ọrụ Cupertino.
Ụdị nke abụọ nke ntinye nke onye ozi ahụ siri ike ime, ma na arụ ọrụ rụrụ arụ ma ọ bụ arụ ọrụ na-ezighị ezi, ọ bụ naanị ya na-enyere aka. Ihe kachasị mkpa a bụ iji kọmputa na otu n'ime mmemme pụrụ iche - a na-ejikọta iTunes ma ọ bụ ihe analog nke ndị mmepe nke atọ - iTools kere.
Gụkwuo: Ịwụnye Telegram na ngwaọrụ iOS
Na obere edemede a, anyị ejikọtala iche iche anyị, nchịkọta zuru ezu banyere otu esi arụnye ozi ozi ekwentị na smartphones na mbadamba na Android na IOS. N'agbanyeghi na enwere uzo abuo ma o bu ihe ndi ozo maka usoro ozo a na-arughari iji dozie nsogbu a, anyi kwadoro ka anyi jiri ya mee ihe. Ịwụnye ngwa site na Ụlọ Ahịa Google na Ụlọ Ahịa Store abụghị naanị ndị mmepe na-akwado ya na usoro nchebe zuru oke, mana nkwenye na ngwaahịa a na-enweta site na ụlọ ahịa ahụ ga-enweta mmelite mgbe niile, ụdị nhazi niile na nrụzi ọrụ. Anyị nwere olileanya na isiokwu a bara uru maka gị na mgbe gụchara ya, ọ dịghị ajụjụ ọ bụla fọdụrụ. Ọ bụrụ na e nwere, ị nwere ike ịjụ ha mgbe niile na ihe ndị dị n'okpuru.
Gụọ kwa: Ntuziaka maka otu esi eji Telegram na ngwaọrụ dị iche iche
Ọrụ Mmelite Na-agba ọsọ na Windows 7
Ebe ọkwọ ụgbọala maka HP LaserJet PRO 400 MFP M425DN
Keyboard bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị maka itinye ozi na kọmputa. Na-enweghị ya, ọ gaghị ekwe omume ịrụ ọrụ ụfọdụ na OS ma chịkwaa usoro ahụ na egwuregwu. Nkwụsị nke ngwaọrụ a na-eme ka ọ ghara ikwe anyị omume ịde ozi na ndị ozi na netwọk mmekọrịta ma na-arụ ọrụ na editọ ederede. N'isiokwu a, anyị ga-atụle isi ihe kpatara ya ma nyochaa ngwọta maka nsogbu a. GụKwuo
A gam akporo ịntanetị ngwa ngwa
Ngwunye ngwa ngwa na Windows 7